Shina hyperbolic aluminium veneer ary mpamatsy | Jixiang
Ny veneer aluminium hyperbolic dia misy fiatraikany amin'ny fisehoana ivelany, afaka mamorona trano manokana izy io, ary azo volavolaina sy alefa arakaraky ny takian'ny mpanjifa isan-karazany hahatratra ny fepetra takiana amin'ny fananganana azy manokana. Ny veneer aluminium miolakolaka roa sosona dia mandray ny rafitra anatiny tsy misy rano sy ny famehezana ny tombo-kase, mba hiantohana ny fahombiazan'ny rano tsara indrindra amin'ny lafiny lehibe kokoa. Izy io koa dia azo ampiasaina eny ambonin'ny veneer alim-borona hyperbolic Mamafa loko maro loko mba hanatsara kokoa ny fijerin'ny maso. Ny famokarana veneer aluminium hyperbolic dia sarotra kokoa, ary ny fepetra takiana amin'ny fahamarinan'ny masinina sy ny fepetra takian'ny mpiasa teknika dia somary avo lenta, noho izany ny veneer aluminium hyperbolic dia manana atiny teknika matanjaka. Izy io dia manana ny mampiavaka ny lanjan'ny maivana, ny hamafiny tsara, ny tanjaka avo, ny afo ary ny hamandoana, ny fametrahana sy ny fikojakojana mety ary ny androm-piainana maharitra.
Ny endriny arkeza tsy manam-paharoa dia manamboatra ireo tranobe miolakolaka izay tsy ampiasain'ny veneer aluminium mahazatra. Satria ny tsipika amin'ny haingon-trano ivelany dia mivoaka avy amin'ny rindrina mankany amin'ny famolavolana fiolahana arc sasany, manasongadina ny atmosfera kanto azo ovaina sy miovaova izy io.
1. endrika tsy manam-paharoa, mampiseho ny hakanton'ny ambonin'ny miolaka;
2. Ny hateviny, ny endriny ary ny firakotra amboniny dia azo namboarina;
3. Ny loko, ny voam-bary ary ny voam-bato dia misy betsaka, ary tsara ny vokatr'izy io;
4. Fanadiovan-tena tsara, tsy mora tasy, mora diovina sy tazomina, ambany ny vidin'ny fikolokoloana;
5. Famolavolana firafitry ny maha-olona, ​​fametahana sy famoahana mety, fametrahana mora sy fananganana;
6. Kalitao miavaka, maharitra, androm-panompoana maharitra, fahombiazana lafo vidy;
7. Ny firakotra ivelany dia fanamiana, marevaka, mahazaka akanjo ary mahatohitra tohika, ary tsy mora mihena;
8. Azo averina simbaina sy ampiasaina izy io, izay mahasoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ampiasaina be izy io any amin'ny hopitaly, metro, gara, seranam-piaramanidina, tranombakoka, efitrano fihaonambe, lobby hotely avo lenta, sns;
Previous: 4D veneer alim-bary vita amin'ny kitapom-bary
Manaraka: Takelaka plastika antibakteria sy antistatika